Biyo-qaybiyeyaasha → Beeraha • Goobaha cayaaraha • naadiyada cayaaraha Warsaw
Ma u baahan tahay biyo-waraabe, cabe ku yaal baarkinka ama goob isboorti? Shirkadda Water Point ayaa bixisa Biyo-siinnada Biyo-la’aanta ah, cabbayaasha, isha laga helo hogaamiyayaasha adduunka ee warshadaha, oo aan annaga u nahay qaybiyaha gaarka ah ee Poland.
Tayada biyaha la cabbo ee biyo-dhaamiska ah waxaa laga kormeeraa gudaha Poland xarumaha fayadhowrka iyo cudurrada faafa, kuwaas oo dammaanad ka qaada in biyaha la gaarayo kuwa qaata ay ku habboon yihiin isticmaalka.
Khubaradu waxay isku raaceen in magaalooyin badan oo Poland ah ay iskugu faanaan karaan biyaha dhadhanka leh ee caafimaadka leh. Biyo Waa nadiif, oo ka madax bannaan faddaraynta bakteeriyada iyo waxoogaa yar macdanta, markaa waad cabbi kartaa cabsi la'aan.
Kani waa nooca biyaha ka soo baxa ilo biyo iyo ilo biyo biyo cabitaan ah, kuwaas oo kufiican meelaha dadweynaha, sida jardiinooyinka, barxadaha, jardiinooyinka, garoomada carruurta iyo xeebaha.
Bixinta helitaanka biyo nadiif ah oo la cabo ee magaalooyinka, waa in fiiro gaar ah la siiyaa xaqiiqda ah in meelaha cagaaran, sida baarkinnada magaalada, garoomada ciyaaraha iyo dhammaan xarumaha isboortiga, halkaasoo dhaqdhaqaaqa jireed ee dadka adeegsanaya ay sababaan baahida kordhaysa ee biyo nadiif ah, ayaa la bixiyaa. biyo.
Caruurta iyo dhalinyarada, gaar ahaan inta lagu jiro jimicsiga adag, waxay u baahan yihiin biyo badan. Markaa, adoo ku rakibaya ilaha biyaha la cabo ee garoomada carruurta, iyo sidoo kale rugaha isboortiga, waxaad ku siin kartaa biyo cabitaan macaan, taas oo bedel u noqon doonta cabitaannada aan wanaagsanayn.
Faa'iido dheeraad ah oo ka jirta dadka cabba dibadaha waa suurtagalnimada baabi'inta dhalooyinka caagga ah iyo qaabeynta wacyigelinta dabiiciga ah ee dhalinyarada.
Goobaha madaddaalada, labajibbaarayaasha, beeraha nasashada iyo xarumaha isboortiga waa meelaha laga heli karo ilo iyo biyo-cabbiyeyaasha biyaha, kuwaas oo aan yareyn oon harraadsan, laakiin sidoo kale qurxiya booskan.
Biyo la cabo ayaa u oggolaanaya nadaafad iyo haraadin deg deg ah, iyo naqshadeynta casriga ah waxay xoojineysaa muuqaalka bannaanka.
Waa muhiim in carruurta la baro da'da hore in biyuhu ka yimaadaan ilo iyo il biyo biyo cabitaan ah oo loogu talagalay ujeeddada cabitaanka oo keliya in gacmaha ama waxyaabaha caruurtu ku ciyaaraan aan lagu maydhin.
Gaar ahaan xilliga xagaaga, dhammaan martida ku dhex socda beerta nasashada ama kaqeyb galayaasha nashaadaadka iyo dhacdooyinka isboorti ee lagu qabtay xarumaha isboortiga waxay qaddarin doonaan xaqiiqada ah inay si fudud ugu harraadsan karaan harraadkooda biyo macaan oo caafimaad qaba, kana soo qulqulaya baraf-baxa ama guga.
Ku rakibida aalado awood u siinaya adeegsiga nadaafadda iyo nadaafadda biyaha nadiifka ah ee cabbitaanka tayada leh ee meelaha magaalooyinka ah ayaa caan ku ah, kuma eka Poland oo keliya, laakiin sidoo kale dalal badan oo Yurub ah. Biyo-cabbiyeyaasha biyaha ayaa ku habboon oo la fududahay in la isticmaalo, marka carruurta, dhallin-yarada, qaangaarka, iyo waayeelka ayaa si guul leh ugu adeegsan kara markasta oo ay u baahdaan. Waxaad si toos ah u cabbi kartaa biyo, waxaad ku buuxin kartaa dhalada biyahaaga ama baaquli eey.
Uma baahnid inaad sido walxaha dhalada biyaha ah maxaa yeelay biyo cusub oo qabow ayaa ku dhow. Bixiyeyaasha biyuhu sidoo kale waxay gacan ka gaystaan ​​daryeelka deegaanka dabiiciga ah iyagoo baabi'inaya qashinka badan ee wasaqda ah.
Biyo la cabo oo lagu keydiyo beeraha nasashada iyo xarumaha isboortiga ayaa noqdey kuwa sii kordha oo caan ah sababtoo ah isticmaalkooda fudud iyo nadaafaddooda.
biyo nadiif ah jardiinooyinkabiyo nadiif ah beertabiyo bilaash ah oo ku yaal jardiinooyinkail biyoodyadailaha biyaha la cabbojardiinooyinkaku cabba beeraha dhexdoodakhamriga ku cabba beertabiyaha xarumaha isboortigabiyaha beeraha dhexdoodabiyo la cabbo ee beeraha nasashadabiyaha beertaguga beeraha dhexdoodabiyaha guga beerta